Moments Neshamwari 29
Kune rima kusavapo kwechiedza here, kana chimwe chinhu chakazviparadzanisa choga uye icho chinotora nzvimbo yechiedza. Kana ivo vakasiyana uye vakaparadzaniswa, rima chii uye chii chiedza?
Rima harisi “kusavapo kwechiedza.” Chiedza harusi rima. Rima ndechimwe chinhu chaicho, kwete chiedza. Rima rinogona kutora nzvimbo yechiedza uye rakavanzika, asi rima rinodzima rima. Chiedza chinozopedzisira chakunda rima nekusimudza uye nekuita kuti rima rive chiedza. Chiedza nerima iro ratinoona kuburikidza nemanzwiro haisi mwenje uye rima mukati mavo, kunyange izvo isu zvatinoona sechiedza nerima zvine hunhu hwavo muchiedza chechokwadi uye nerima. Sechinhu, rima chinhu homogeneous chinhu, iri iro mudzi, hwaro kana hwaro hwese kuratidzwa sezvinhu. Mumamiriro ayo epakutanga, yakanyarara uye yakafanana pachayo. Hazvina kuziva, kusanzwisisa uye hazvina kugadzikana. Chiedza isimba rinobva kune vakangwara vakapfuura nemuvhenekeri uye vari pamusoro kana kupfuura kuratidzwa. Kana vachenjeri vakatungamira simba ravo rekuyera pane chisina chinhu uye chakasarudzika chinhu, iro rima, iro chikamu chechinhu kana rima, uye pane iro rakatwasirwa chiedza, rinobuda muchiitiko. Nekutanga kwebasa, chinhu icho chaive chimwe chinova zviviri. Mukuita rima kana chinhu hachisisiri chinhu, asi chiri zviviri. Uku huso hwezvinhu kana rima rinozivikanwa seya wemweya. Iwo mweya nenyaya ndezve vaviri vanopesana kwechinhu chimwe chete, chiri chinhu chinotangira, asi mweya-unoshanda muchiito. Izvo zvikamu izvo izvo chinhu chakapatsanurwa seyomweya-chinhu, pamwe nekuratidzira mweya-chinhu zvizere, zvakafarisisa pavari uye iko kwakatangira mubereki wavo midzi uye zvakare chikonzero cheo kuita kana kuratidza. Kudzvinyirira ndiwo mudzi uye mubereki wezvinhu zvese zvisina kujekeswa zviyero zvehukuru hunoratidza pamwe neiwo huwandu hwakazara. Chiedza ndicho chikonzero chekuratidzwa uye cheo chiito mune chimwe nechimwe chimiti uye cheiyo chiratidzo chinoratidza pese. Saka kuti mune imwe neimwe isingazivikanwe unit, uyezve mukati mekuratidzira uremu hwakazara hwakamiririrwa: mubereki wemuti chinhu uye simba rekubata sechiedza. Muchikamu chimwe nechimwe chinodaidzwa kuti cheMweya-chinhu mune izvo zvinogona kune mubereki, chinhu, uye simba, chiedza. Chidimbu chinomiririrwa nechikamu icho chechinhu chisingaonekwe icho chinodaidzwa kuti chinhu, uye chiedza chinomiririrwa nerumwe rutivi kana chikamu cheicho chisingaonekwe chinonzi mweya. Zvese zvakasarudzika kana zvinoratidzwa zvinodaidzwa kubva pazvinhu zvisinga tsanangurike kana rima muchiratidzwa nesimba rekuvhenekera, uye ichi mwenje chengetedza mweya wechinhu nokudaro unodanwa mukuenderera mberi mukuita mukati menguva yose yekuratidzwa. Munguva yekuratidzwa iwo mwenje uripo mukuratidzwa nerima ndicho chikonzero cheicho chatinoti mwenje. Chinhu icho chiri kuratidza ndicho chikonzero cheicho chatinoti rima. Chiedza nerima zvinoratidzika kunge zvinopesana uye zvinoita sekupa nzvimbo kune mumwe nemumwe pakuratidzwa. Masikati neusiku, kumuka uye kurara, hupenyu uye kufa, ndizvo zvinopesana kana kudzoreredza mativi echinhu chimwe chete. Izvi zvinopesana zvinoshanda neimwe nzira munguva pfupi kana dzakareba, kudzimara rima rashandurwa kuva chiedza. Chimwe nechimwe chinoratidzika kune chimwe sekusafanirwa kunyange zvakadaro chimwe kune chimwe chinodikanwa. Munhu ane rima maari uye nesimba rekuvhenekera. Kumunhu manzwi erima ake uye pfungwa dzake chiedza chake. Asi izvi hazviwanzo kufungwa zvakadaro. Kune iyo pfungwa pfungwa dzinenge senge rima. Kune pfungwa pfungwa dzakasviba. Icho icho kumanzwiro anoita sekunge chinobva kuzuva, isu tinodaidza kuti mwenje wezuva. Kune pfungwa pfungwa uye izvo zvavanodaidza kuti light zvakaita serima kana iro, pfungwa, rinovhenekerwa nesimba rekuvhenekera kwaro mubereki kungwara. Kujeka kwezuva uye kungwara kwekuona kwazvinoita kunogona kuuya kwatiri kunyange pfungwa dzakanyudzwa mukati uye mukukonana nerima; ipapo tichaona mwenje wezuva sekuratidzira kana chiratidzo chechiedza chaicho. Rima rinopa nzvimbo uye rinoshandurwa kuva yechiedza chekusingaperi sezvo richikundwa nemafungiro uye nezviito zvepfungwa.
Chii chinonzi radium uye sei zvingaita kuti irambe ichirasira nguva dzose nesimba guru pasina chero kuonekwa kusvibiswa nekurasikirwa kwesimba uye muviri wayo, uye chii chinokonzera radioactivity yayo?
Izvo zvinofungidzirwa kuti munyori wemubvunzo anoziva kujairana nesainzi nezve nezve ichangobva kuwanikwa yeradium, sekudzwa kwayakaita kubva pitchblende, kuwanikwa kwayo naMadame Curie, simba rayo remwenje, mhedzisiro yechiitiko chayo paneimwe miviri, kushomeka uye kunetseka kunopinda mukugadzirwa kwayo.
Radium inhengo yemuviri yezvinhu kuburikidza neicho simba uye chinhu chakanakira kupfuura chemuviri chinoratidzwa kune pfungwa. Radium inyaya yemunhu mukuwonana neimwe nyaya uye mauto anowanzofungidzirwa nezvekufungidzira. Ether nemauto aya inzvimbo dzezvinhu zvakapusa pane zvemuviri uye ivo vanoshanda kana kuburikidza neicho chinonzi chinhu chemuviri, ingave yemuviri nyaya yedhaimani kana mamorekuru e hydrogen. Dai zvainge zvisiri zvekufungidzira kana zvekunyepedzera kuita zvinhu kuburikidza nechimiro chepanyama kungadai kusine shanduko kana kuora kwezvinhu zvepanyama. Kuita kwehunyanzvi kuburikidza nechinhu chakakomba kunokonzera kusanganisa kwe “makemikari” uye shanduko yenyaya mukushandiswa kwese uye sekutarisirwa nemachemicals.
Radium inyama yemukati inoitwa zvakananga pairi kana kuburikidza neyeredzi yechinhu chisiri chechitatu chinhu uye pasina kushandurwa nemabatiro eichi chinhu cheAralral. Zvimwezve zvinhu zvepanyama zvinoitwa ne astral jambo, asi zvakaderera pane radium. Kazhinji, mhedzisiro yechiitiko chevazivi pane zvimwe zvinhu zvemuviri haisi kutaridzika nekuti nyaya yemuviri haigone kupa kubatana nekupokana nenyaya yeastral inopihwa neRadium, uye imwe nyaya yakawanda haisiyo yakanangana nekutarisana nenyaya yeastral sezvazviri. radium. Infinitesimal uye isingapindike zvimedu zve radium zviripo mune zvese nyaya. Asi parizvino pitchblende inoratidzika kunge ndiyo sosi kubva kwavanogona kuunganidzwa muhukuru hukuru, kunyange zvidiki. Kana zvimedu zvinonzi radium zvakasunganidzwa kuita svumbunzo imwechete, chinhu chemuastral chinoshanda zvakananga pairi uye kuburikidza nacho mumhando uye simba rinoonekwa kune manzwi.
Iyo radio-chiitiko che radium haina, sezviri kufanira ikozvino, nekuda kwekugadzira kwayo kana kurasa kubva pachayo zvimedu zvemuviri wayo. Chinhu chenyama chakaumbwa nacho chakasanganiswa haipe radio-chiitiko kana rimwe simba rinozviratidza naro. Radium harisi simba, asi svikiro chesimba. (Chinhu chakapetana kaviri uye chiripo pamapuraneti akasiyana. Panduru imwe neimwe chinhu kana chichiita uye chiine simba kana chashanda. Saka nyaya yemuviri inyaya inongoshanda uye simba rinoshanda. Chinhu chemuEastral chiitiko chezviitiko zvezviwi uye kumanikidza pane astral ndege ino shanda chinhu chemuartral.) Radium ndiwo muviri unoshandiswa nawo pazvinhu zveastral. Radium inyaya yepanyika yemuviri; nhepfenyuro-chiitiko inyaya yechaserese kubva pasireal world inova inoonekwa nenzira yeiyo radium. Nyika yeredral yakatenderera uye kuburikidza neyepanyama pasirese, uye, sezvo nyaya yavo yakajeka, iri mukati uye kuburikidza nekurema kwezvinhu, seSainzi inotaura kuti ether iri mukati uye kuburikidza necrowbar, kana sezvazvinozivikanwa kuti magetsi anoita mukati uye kuburikidza nemvura. Kunge kenduru inopa kujeka, radium inoburitsa mwenje kana simba. Asi kusiyana nekenduru, haina kupiswa kunze mukupa iwo mwenje. Kunge jenareta kana waya yemagetsi inoita kunge inoburitsa kupisa kana mwenje kana magetsi, radium inoita kunge inoburitsa kana kurasa simba; uye saka zvinoita, pamwe. Asi iwo mwenje kana rimwe simba rinoita seriri kugadzirwa harina kupihwa waya. Izvo zvinozivikanwa kuti simba remagetsi haribvi mune dynamo kana waya yemagetsi. Zvinozivikanwa zvakare kuti iwo magetsi iwo unoratidzira sekupisa kana mwenje kana simba inotungamirwa padivi neaya waya. Nenzira imwecheteyo, iwo mhando kana simba iro rinozivikanwa seredhiyo-chiitiko rinoratidzira kuburikidza neRadium kubva kunobva zvino iko kusingazivikanwe nesainzi. Asi iro rinobva mukurumbira harisi radium chero rinobva kupi remagetsi iri dynamo kana waya. Izvo zvimiro zvemuviri wayo zvinokandirwa kunze zvopiswa kunze kana kusevenzesa zvishoma pane zvimedu zvedynamo kana waya yemagetsi nekuita kwesimba remagetsi. Iko kunobva kune icho chinoratidzwa kuburikidza ne radium zvakafanana neiyo sosi yekuratidzwa kwemagetsi. Dzese dzinouya dzichibva kumwechete kwadzo. Musiyano uripo pakati pekuratidzwa kwemagetsi senge kupisa, mwenje kana simba uye izvo zvinoratidzwa kuburikidza nemuviri radium zviri pakati pekuratidzira kwete mumagetsi kana redhiyo-chiitiko. Izvo zvimiti izvo zvakaverengedzwa dynamo, jenareta kana waya, hazvisi zvemhando imwechete ne izvo zvimedu izvo radium yakagadzirwa. Chinhu cheAralral uye mauto anoita mukati menhau yeredral anoita zvakananga pane radium pasina chimwe chinhu kana kufananidzira. Iyo yazvino inotamba kuburikidza negetsi yemagetsi inooneswa nezvimwe zvinhu, zvakaita semabhatiri, magneti, jenareta, dynamos, mupfu uye mafuta. Hapana chimwe chezvinhu izvi chinodikanwa neRadium nekuti icho chakanangana nacho uye choga chinobvumira chinhu chemuastral kuratidza kuburikidza ne icho kana nezve icho, iyo radium.
Izvo zvinozivikanwa kuti magetsi emagetsi haapinde waya, asi kutenderedza waya. Izvo zvakare zvichawanikwa kuti nenzira imwecheteyo nhepfenyuro-basa harisi mu radium, asi kutenderera kana nezve radium. Vagadziri vemagetsi vaedza uye vachiri kuyedza kugadzirisa dzimwe nzira neiyo magetsi emagetsi anogona kuitwa kuratidza uye kutungamirirwa pasina kushandisa muputi kana mafuta kana galvanic chiito. Radium inoratidza uye inoratidza kuti izvi zvingaitwa sei.